5 Baaskiil Best tamashle Si Socda In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 5 Baaskiil Best tamashle Si Socda In Europe
by Laura Thomas 27/08/2019
safarka tareenka Austria, safarka tareenka France, safarka tareenka Germany, Tareen Travel Holland, safarka tareenka Italy, safarka Europe
Haddii ay dhowr maalmood waxa uu isku dayayaa in aad xisaabiso geerka baaskiil laakiin weli ku riyaaqayaa ah, xusus baaskiil muuqaal dabiici ah, ama kortaan 1,800km Tacaddi ka Canterbury in Rome, our 5 Baaskiil Best tamashle Si Socda In Europe aad dhiirrin doona!
1. First liiska of our 5 Baaskiil Best tamashle Si Socda In Europe waa: Passau, Germany Si Vienna
mid ka mid ah tani ma aha, waayo, kaman garaace baaskiil sheegnay marsho ah. Waayo, wax yar ka badan khibrad, laakiin ma aha arrin baaskiil Tour De France, Tan adigaa iska leh!
A hal todobaad wadada wareegga ugu horeysay, waxaan kula talin lahaa tareen ka xadka Jarmal inay Passau, magaalo qurux badan halkaas oo webiyaasha Inn, Danube iyo Ils kulmaya. Rent baaskiilada ka Matthias at Drasch Bike Clinic iyo baydalka off oo ay la socdaan gaadiidka waddooyinkiisa oo lacag la'aan ah ka soo hadhay Danube.
Esterbauer daabacdaa Hanuuniye in English for wadada this classic: maps aad u fiican (Ha isku dayin in la raaco halka reading in kastoo. isku dayday in. Sheeko Gaaban; waxaa si xun u dhamaaday) maps ayaa ku siin doona Talooyin for liiska hoy iyo meelaha kale ee xiisaha jidka, sida melk iyo geedka canabka ah Austria iyo meelaha midhaha sii kordhaya. Fahrrad-Klinik ayaa heshiis la a hotel oo ku taal duleedka Vienna halkaas oo aad ka tagto baaskiilada ee. Bixiya maalin ama si in Vienna ka hor qaadaan tareenka dib ugu Linz iyo guriga duulaya.
Munich in ay Tareenadu Passau
Nuremberg in Tareenadu Passau
Waayo, juqraafi ahaan ku xujeeysay, this waa in aad 5 Best tamashle Baaskiil in safri in Europe liiska. Tani waa wadada ugu dheer webk wareegga ee Italy! Via Francigena The waddaa ka Bernard Great St ku Pass ee xuduudda la leh Switzerland si ay u St Peter Basilica ee ee Rome.
Marka wadada Xajka a, waa in ka badan kun sano jir. wadada wuxuu qaadanayaa rag fuula u marayo Bbc Tuscan oo la soo dhaafay magaalooyinka Dr Makumbe sida San Gimignano. naftaada siin lahaa laba maalmood oo dheeraad ah loogu talagalay oo keliya photo joogsato, marmar ah Dhadhaminta khamri, iyo inaad ku raaxaysatid galo grand galay Rome.
Florence si Tigidhada Rome
3. Danube Cycle Jidka
Haddii aad rabto in aad aad safar arrin qoyska markaas Danube Cycle Jidka waa bet aad ugu fiican! Waa mid ka mid ah jidadka baaskiil ugu fiican u yaqaan oo si fiican u safray in Europe. Sidaas darteed waa layaabna ma leh waa mid ka mid ah 5 Baaskiil Best danbeeyaan inuu u safro ee Europe.
Waxaa socota Danube River ka ay isha ku Germany jidka loo maro Badda Madow oo dhan, laakiin stretch ugu caansan ee raad yahay 190 mile (306 km) qayb u dhaxaysa tuulada muuqaal dabiici ah Jarmal ee Passau iyo Vienna, Austria. Ku dhowaad gebi baabuur lacag la'aan ah oo xad flat, this path—which crisscrosses the border between Germany and Austria throughout much of the ride—is perfect for cyclists of any age and ability.
Berlin si Tareenadu Dresden
4. Holland kulankooda Network
It aad u adag tahay in la qor hal waddo baaskiil u taagnayd sida ugu fiican ee Holland. Dhab ahaan, our 5 Best tamashle Baaskiil inuu u safro ee liiska Europe ka kooban kari kaliya tamashle Holland! Tani waa dal leh sida baaskiil fantastik ah kaabayaasha in aad tahay qof lagu dawayn meel kasta oo aad baaskiil! Ka dib markii shabakada Isgoyska oo ka mid ah wadooyinka webk, raacid weheliyaan 32,000 km ee jidadka baaskiilka waa farxad guri la masaafo gaaban u dhexeeya meelaha caanka ah.
Haddii aad raadineyso weeyna in ay sahamiyaan nabad ah xeebaha iyo dekedda quruxsan tuulooyinka xeebta badda woqooyi Holland ee, midabo beeraha rabarka sii kordhaya ee dalka ama wadooyinka magaalada caasimada firfircoon ee Amsterdam agagaarka, waxaad ka heli doontaa jidadka baaskiilka in gudashada wax walba waa weyn oo ku saabsan baaskiil firfircoon xawaaro leisurely.
5. Cycle The Route Si Paris From Dieppe (ama London)
Waxaa laga yaabaa in aanay masaafo dheer qaar ka mid ah (Waxay ahayd ii! lol!) laakiin 127 miles from Dieppe to Paris provides a beautiful few days’ baaskiil! The wadada wareegga ugu caansan waa Verte Avenue ah, laakiin jidka ugu wanaagsan ayaa waxay horseedday by Donald Hirsch.
wadada Donald ee
The miles hore ee wadada meander iyada oo yar tuulooyinka Faransiis, ka badan taxne rogid iyo beeraha ee la soo dhaafay ka buuxaan sarreen iyo hadhuudhkii. Isku day in aadan samayn Dhadhaminta khamri aad ugu dhakhsaha badan ee safarka in kastoo! waddooyinka waa xasilloon oo nabdoon, in kastoo, oo waxaa jira oo kaliya hills filan si ay u sii xiiso leh laakiin aan daal. website Donald ayaa jiraan xiriiro ay la wareegga hoy saaxiibtinimo.
aad ugu dhow Paris, ka duwan Verte Avenue ah, wadada this aad qaadataa iyada oo taxane ah oo kaymaha ugaarsiga boqornimada si looga fogaado waddooyinka. Ka dib markii 120 miles tuulooyinka, beeraha, iyo kaymaha ugaarsiga, aad soo gashid Parc St Cloud. Waa meel ka mid ah dhirta dhaadheer oo kaliya ka dib markii Versailles, gaadiidka lacag la'aan ah, dheer iyo si toos ah, iyo xuduud dhirta dhaadheer. Markaasuu, aad aragto in waddada laga furay baxay meel sallax, ilihii, iyo wax ka baxsan.
wadada Donald ayaa aad qaadataa bidixda, si aad u ma arki waxa dhamaadka waddada. Laakiin waxaa qiimo baaskiil on si ay u baaraan. Waxaad ka heli naftaada on buur, oo dhan of Paris fidiyey idinka soo hor jeedda. Waxaa ka tagi doono aad neefsan ka view, ma dadaalka badan ee.
Ready si aad u hesho baydalka ku saabsan oo dooro mid ka mid ah 5 Baaskiil Best tamashle Si Socda In Europe? Great! meelaha Oo intaas oo dhammu lagu tagi karaa tareen iyadoo la kaashanayo Save A tareenka Dabcan! Sidaas bilaabaan qorshaynta iyo bilaabaan baaskiil!
Do you want to embed our blog post “5 Best Cycling Trails To Travel In Europe” gal your site? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/5-best-cycling-trails-europe/– (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah).
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa / ZH-CN si / de ama / ja iyo luuqado badan.
#baaskiil #pedal Bike bikefriendly familytrip roadtrip
safarka tareenka, safarka tareenka Switzerland, Talooyin safarka tareenka, safarka Europe
Safarka Business by tareenka, Talooyin safarka baabuur, safarka tareenka, Talooyin safarka tareenka, safarka Europe
safarka tareenka, safarka tareenka France, safarka Europe